5 siyaabood oo hal abuur leh oo lagu ilaaliyo qorsheeye maalinle ah
Bogga horeCajiib ah Barnaamijyo waxbarasho
1. Wargeyska Xabadda
Sida loo xafido xusuus-qor
Sannadkii 2013, nashqadeeyaha Ryder Carroll wuxuu abuuray nidaam qorshayn dabacsan kaasoo kuu ogolaanaya inaad dhammaan fikradahaaga iyo hawlahaaga ku hayso hal meel. Kani waa Bullet Journal: Waa ayo, waa maxay iyo sababta Bullet Journal, isku-dhafka qorsheeye maalinle ah, daba-jooge caado, liiska fikradaha, iyo wax ka badan.
Joornaalka Bullet, Joornaalka Bullet: Buugga xusuus-qorku wuxuu ku habboon yahay buug-yaraha dhibco leh ee qaabka A5: way ku habboon tahay in la qoro, sawiro oo la sawiro qaabkan. Laakiin waxaad qaadan kartaa buug kasta oo dhumuc weyn leh.
U dhaaf bogagga ugu horreeya shaxda tusmada.
Marka xigta, qorshee lix bilood. Isticmaal xariiqo toosan si aad bogga u qaybiso saddex qaybood, mid walbana ku qor magaca bisha.
Marka xigta, qorshe bisha. Bogga bidixda ku yaal, ku qor tirooyinka iyo maalmaha toddobaadka ee tiir, geli dhacdooyinka iyo shirarka, taariikhaha hore loo yaqaan, qorshaha. Bogga xiga, ku muuji yoolalka iyo qorshayaasha aan weli ku xidhnayn maalmo gaar ah.
Faafida soo socota ayaa u heellan arrimaha maalinlaha ah. Taariikhda, ku qor dhammaan hawlaha tiir. Joornaalka Bullet wuxuu leeyahay Joornaal u gaar ah: Nidaamka Qoraalada:
dhibic (•), hawl;
goobada (°), kulan ama dhacdo;
garaac (-), note;
calaamad (*), ganacsi degdeg ah;
calaamada cajaa'ibka (!), Fikrad xiiso leh oo muhiim ah in aan la lumin.
Bullet Journal, waxa kale oo aad ka samayn kartaa liisaska iyo ururinta (tusaale, liiska buugaagta aad rabto in aad akhrido), ilaaliso caadooyinka ama kharashaadka la socdo. Qor wax kasta oo aad rabto, sawir, sawir, khayaali, ta ugu muhiimsan, ha iloobin in aad tiriso boggaga oo qayb kasta ku darso shaxda tusmada.
Bullet Journal, qorsheeye maalinle ah oo aan daahin, waa la hayn karaa maalin kasta. Ama iska daa in muddo ah oo isla markaana ha ka welwelin in ay jiri doonaan bogag madhan oo si weyn u dumin kara.
Waxay isku daraysaa hawlo badan waxayna caawisaa habaynta qaybaha kala duwan ee nolosha.
Joornaalka Bullet wuxuu leeyahay tusmooyin ka kooban kaas oo sahlaya in la dhex maro fikradahaaga iyo qorshayaashaada.
Nidaamkan jadwalku waa mid aad u dabacsan oo aan lahayn xeerar. Sidaa darteed, waxay ku habboon tahay labadaba minimalists iyo dadka hal-abuurka ah.
Waa maxay khasaaraha
Kuwa loo isticmaalo xusuus qorka caadiga ah, nidaamku wuxuu u ekaan karaa mid aad u dhib badan. Waxaad u baahan tahay inaad xifdiso heshiisyada, naqshadeyso boggaga naftaada, ogow sida ay dhammaantood u shaqeeyaan.
Si aad u hesho Joornaalka Bullet ee saxda ah waxaad u baahan tahay buug-qore-dhibic, kuwaas meel walba laguma iibiyo.
Sideed u habayn kartaa
Joornaalka Bullet wuxuu ka tagayaa meelo badan oo male-awaal ah. Waxa kaliya oo aad ku heli kartaa buug xusuus qor iyo qalin ah. Oo haddii naftaadu ay weydiisato hal-abuurnimo iyo midabyo dhalaalaya, isku day inaad la timaado naqshad xiiso leh faafin kasta. Waa kuwan doorarka qaar:
Qorshaha bilaha ah
Qorshayaasha usbuuca / interesno.co
2. Feejignaan toos ah
Farsamadan Nidaamka Maareynta Waqtiga Autofocus waxay ka caawisaa in la dejiyo qaska ganacsiga iyada oo aan dadaal badan la helin oo aan lumin fikradaha muhiimka ah.
Buug kasta oo xusuus qor ah ayaa qaban doona. Halkaas waxaad u baahan tahay inaad ku qorto dhammaan hawlaha maskaxda ku soo dhaca. Haddii mid iyaga ka mid ah uu ku xidhan yahay taariikh gaar ah, calaamadee. Marka aysan jirin arrimo deg-deg ah oo hadhay, fur buugga xusuus-qorka oo si fiican u eeg liiska, dooro dhaqdhaqaaqyada aad hadda wadnaha ku hayso. Alaabooyinka la dhammeeyay waa la isweydaarsaday. Bogagga aan lahayn hawlo furan waxaa lagu calaamadeeyay iskutallaab.
Sidoo kale, qaabka qulqulka, waxaad ku duubi kartaa fikradaha, riyooyinka, qorshayaasha, iyo in ka badan.
Waxay qaadanaysaa ku dhawaad ​​waqti iyo dadaal. Looma baahna in kiisaska la kala saaro ama la isticmaalo halyeeyo.
Autofocus waxay ku habboon tahay dadka niyadda iyo dabeecadaha qallafsan ee ay ku adag tahay qorsheynta.
Fikradaha iyo ficillada qaarkood waxay ku lumin karaan liiskan ballaaran. Gaar ahaan haddii aad leedahay far-qoris xun.
Autofocus macnaheedu maaha qurxinta badan: waxaa loo raray sidii nidaam qorsheyn oo aad u yar. Laakin ka dib marka aad qorto dhammaan kiisaska, waxaad sawiri kartaa cinwaan qurux badan oo leh qalimaan dareemo. Ama ku dheji dhejiyeyaasha mawduucyada ku dheggan walxaha qaarkood. Taleefanka, oo ku xiga xasuusinta si aad u wacdid, baqshad, halkaas oo aad u baahan tahay inaad warqad u dirto. IWM.
Qurxinta dhejisyada iyo calaamadaha / stellabeausticerco / instagram.com
Madax iyo dhejisyo qurux badan / chajaneri_study / instagram.com
3. Muuse iyo bahal
Nidaamka waxaa alifay farshaxanada Jana Frank, ugu horrayn dadka hal-abuurka ah iyo kuwa madax-bannaan. Taasi waa, kuwa leh hawlo badan oo hal abuur leh oo dabacsan.
Saacad kasta oo shaqo ayaa loo qaybiyaa baloogyo: 45 daqiiqo oo loogu talagalay hal-abuurka ama shaqada garaadka, iyo inta kale ee wakhtiga hawlaha caadiga ah. Muddadan shan iyo tobanka daqiiqo ah, waxa fiican in la qabto hawlahaas oo aan u baahnayn diiqad maskaxeed. Haddii aad ka shaqeyso guriga, waxaad dhaqi kartaa weelka ama waxaad waraabin kartaa ubaxa. Haddii aad xafiiska ku jirto, kala sooc waraaqaha, ka samee nuqullo dukumeenti ah.
Yana sidoo kale wuxuu xooga saarayaa in hawlaha hal-abuurka ay tahay in la qorsheeyo, iyo sida taxadar leh ee suurtogalka ah. Tani waxay kuu sahlaysaa inaad wax ka qabato, mana lumin doontid waqti aad ka fikirto waxaad hadda samayn lahayd. Ma aha oo kaliya in la qoro maqaal, laakiin Isniinta, raadinta walxaha, Talaadada, samaynta qorshe, Arbacada, qorista qabyo, Khamiis, tafatir. IWM.
Waxay la mid tahay jadwalka caadiga ah: Samee liis waxqabadyo si aad waqti u qaadato maalin kasta, toddobaadle, iyo bishiiba, ka dibna ku qor buug-yarahaaga.
Kaliya qiyaas, buug kasta oo ku habboon ayaa sameyn doona.
Nidaamku waa sahlan yahay in la qabsado naftaada iyo baahiyahaaga.
Habka kuma haboona kuwa aan waqtigooda maamulin. Haddaba, dhakhtarku ma dooranayo marka la samaynayo qalliin degdeg ah.
Sidan wax loo jadwaleeyo way adag tahay haddii aad shaqada ku leedahay xeerar adag, tusaale ahaan, hal nasasho.
Markii hore, 365 maalmood ee qof aad u hal abuur leh, oo lagu sii daayay nidaamkan, waxay u ekaayeen buug midab leh. Waxayna Jana Frank soo dhaweysay sawirista iyo tijaabooyin kasta oo hal abuur leh oo ku jira buug-yaraha. Tusaale ahaan, waxaad hoosta ka xariiqi kartaa ciwaanada qaybta cajalado qurxin ah ama waxaad ku muujin kartaa qurxinta ubaxa ee dhinacyada bogga.
Cajalada qurxinta iyo qaababka ubaxa / einfach_lilienhaft, joornaalka_junkies / instagram.com
Sawirro iyo dhejisyo / my_pplanner / instagram.com
Sawirro / bujowithasi / instagram.com
4. Liiska la qabanayo
Habka waxaa loo sameeyay si loo barto sida loo kala horeeyo loona maareeyo si loo sameeyo waxa ugu muhiimsan. Dhammaan hawluhu waxay u qaybsan yihiin saddex liis: wax-qabasho, dhammaystir-qabasho, iyo inaan la-qabin. Marka hore, waxaad ku dari kartaa saddex dhibcood oo keliya, wax dheeraad ah maaha. Inta kale ee hawlaha waxaa loo arkaa inay ka muhiimsan yihiin waxayna ku dhamaanayaan liiska wax-qabadka.
Hawsha la dhammeeyey ee tiirka kowaad waxa loo baahan yahay in loo raro ta labaad. Halkaa marka ay marayso, sida liisaska hubinta ay u tababaraan maskaxdaada si ay u noqdaan kuwo wax soo saar badan iyo ujeedo ku jihaysan waxay kordhisaa heerka dopamine, iyo iyada oo la socota wax soo saarka. Liiska wax-qabadka, boos ayaa loo diyaariyey hawl cusub, kaas oo laga soo wareejin karo kooxda saddexaad.
Nidaamku wuxuu caawiyaa in la ogaado hawlaha dhabta ah ee muhiimka ah iyo kuwa loo deyn karo hadhow.
Habka waa mid aad u fudud oo ku habboon, oo ku habboon xitaa kuwa bilowga ah ee qorsheynta.
Hawlaha qaar ayaa ku lumi kara liiska la qabanayo oo aan la fulin.
Kuwa jecel inay wax walba qaabeeyaan, qoraalladan oo kale waxay u ekaan karaan kuwo qas badan.
Ku dar sawirro, dhejisyo, iyo googooyn joornaal liiskaaga.
Istiikaro iyo sawirro / my_pplanner / instagram.com
Qurxinta dhejisyada iyo dhejisyada / angeltemte / Instagram.com
5. Nidaamka 1-3-5
Kaliya sagaal hawlood ayaa la qorsheyn karaa maalin kasta, mar dambe ma jiraan. Marka hore, hawsha maalinta, ugu muhiimsan, waa in la dhammeeyaa. Saddexda soo socota sidoo kale waa muhiim, haddii ay suurtogal tahay, iyagana hagaaji. Shanta kale waa waxyaabo yaryar oo sare oo aad ku bilaabi karto haddii aad firaaqo leedahay.
Hawlaha aan la dhammayn waxaa lagu wareejinayaa maalinta xigta.
Fudud, degdeg ah, habboon Buug kasta oo xusuus qor ah ayaa qaban doona.
Nidaamku wuxuu ku bari doonaa sida loo kala hormariyo.
Ku habboon kuwa hadda bilaabaya inay xafidaan xusuus-qor.
Kuwa leh hawlo badan, xadka sagaal wax-qabad maalintii waxay u ekaan kartaa wax lagu qoslo oo yar.
Tusaale ahaan, samee collage fiican oo ku xiga liiskaaga wax-qabadka.
Collage design / wikat.planning / instagram.com
Collage oo ku jira xusuus qor / wikat.planning / instagram.com
Collage iyo sawiro / wikat.planning / instagram.com
Sida aadan uga tagin xusuus-qorkaaga
Marka hore, go'aami haddii aad u baahan tahay. Haddii aad leedahay xasuus wanaagsan, oo aysan jirin hawlo aad u badan, xusuus qorku wuxuu noqon doonaa waqti lumis iyo dadaal.
U hoggaami qorshahaaga qaab ku habboon. Xitaa haddii aysan u ekayn buugaagta xusuus-qorka ee warbaahinta bulshada oo qurux badan. U samee buug-yaraha sidaad jeceshahay, qor waxa aad u malaynayso inay lagama maarmaan tahay: arrimo yar yar ama shirarka muhiimka ah oo keliya. Xeerar ma jiraan, qorshayuhuna waa aaladdaada, ee maaha mulkiilaha.
Dooro buug-yaraha ugu fiican. Mid ku habboon mid ka mid ah boorsooyinkaaga oo aan noqon doonin mid dhibsado. Haddii aad ka baqeyso inaad ku qorto buug qaali ah, waxaa fiican inaad doorato wax ka fudud. Haddii boggaga boodidu ay tahay mid caajis ah oo dhiirigelinaysa, iska illow xusuus-qorayaal taariikhaysan.
Ku hay buug xusuus-qor ah oo anfacaya mar walba. Sido shaqada, socodka iyo maqaaxida. Ka soo saar bacda isla marka aad guriga timaadid. Ha iloobin inaad saarto miiska sariirtaada ka hor intaadan seexan.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 5 siyaabood oo hal abuur leh oo lagu ilaaliyo qorsheeye maalinle ah!